के छ, सिके राउतको बहुचर्चित पेनड्राइभमा ? « Naya Page
के छ, सिके राउतको बहुचर्चित पेनड्राइभमा ?
प्रकाशित मिति : 28 November, 2018 4:34 pm
काठमाडौं, १२ मंसिर, राज्यविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा रौतहट कारागारमा रहेका सिके राउतलाई थुनामै पठाउने या रिहा गर्ने भन्ने निक्र्याेलमा पुग्नुअघि यस प्रकरणको पेनड्राइभ झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । के छ त्यसमा ? कौतुहलताको विषय बन्ने नै भयो ।
नौ वटा फोल्डर रहेको पेनड्राइभमा ४ वटा भिडियो छन् भने ५ वटा तस्बिर समावेश छ । जहाँ मधेस स्वराज संक्षिप्त रोडम्याप शीर्षकमा तीन वटा भिडियो छन् । पहिलो ५ मिनेट ३३ सेकेण्ड, दोस्रो भाग ३८ मिनेट १२ सेकेण्ड लामो र तेस्रो भाग १ घण्टा ३० मिनेट ४२ सेकेण्डको छ ।
उनले अलग्गै मधेश राज्यको छुट्टै झण्डा र २ मिनेट १५ सेकेण्ड लामो राष्ट्रिय गानसमेत तयार पारेको प्रमाण त्यसैमा छ । उनको भिडियो अभिव्यक्ति मधेसी जनतालाई केन्द्रीय सरकारमाथि जाइलाग्न भड्काउने प्रकारको छ ।
भिडियोको सुरुमै राउतले सुनेका कुरा खुला दिमागले सोच्न आग्रह गरेका छन् । आफ्ना अभिव्यक्तिलाई अमृतवचन भन्दै उनले त्यो सुन्नेले दिमागमा जमेको पुरानो विचार (जसलाई डब्बामा बिग्रिएको अचारको ) संज्ञा दिइएको छ ।
जसलाई फालेर अमृत राख्नका लागि ढक्कन खोल्न आग्रह गरिएको छ । भनेका छन्, ‘हाम्रो हात नेपाली फिरंगीले बाँधिदिएको छ । तसर्थ आजादी ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला हात खोल्नुपर्छ ।’
केन्द्रीय सरकारले मधेसका जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्जजस्ता नाकाबाट राजस्व उठाउने तर त्यो राजस्व हामीलाई नदिने ? राजस्व उठाउने हामी, प्रयोग गर्ने नेपालीले ?’ नेपालीले मधेसका मालपोेत, साधन स्रोत, जंगल सबै लिएर गइरहेको तर मधेसीले प्रयोग गर्न नपाएको भिडियोमा सुन्न पाइन्छ । उनले मधेश स्वतन्त्र बनाउन फिरंगी सेनालाई मधेसबाट फिर्ता गराउनुपर्नेसमेत बताएका छन् । भनेका छन्, ‘९५ प्रतिशत सेना मधेसबाहिरबाट आएका फिरंगी हुन् ।
जबसम्म तिनलाई फर्काएर मधेसीलाई नै सेना बनाउन सकिन्न तबसम्म जतिसुकै नयाँ संविधानको कुनै मतलव हुँदैन । मधेस स्वतन्त्र बन्न आफ्नै सेना चाहिने उनको अभिव्यक्ति सो भिडियोमा छ ।
सात वर्षको अवधिमा ६ प्रतिशतबाट ३६ प्रतिशत पहाडी मधेस झरेको र कब्जा जमाउँदै गएको हुँदा पहाडियालाई तराई झर्नबाट नरोके मधेसी आफ्नै भूमिमा शरणार्थी बनेर जिउन बाध्य हुनुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत भिडियोमा सुन्न पाइन्छ । राउतले मधेस सरकार नभई स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन पूरा नहुने बताएका छन् ।
त्यसका लागि १० लाख मधेसी जनता एकीकृत हुने, नेपालका संसद्मा जति पनि मधेसी सांसद चुनिएका छन् उनीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएर मधेस सरकारको आफ्नो छुट्टै निर्वाचन गर्न लगाउने र स्वतन्त्र मधेस सरकारको घोषणा गर्नेसम्मको उनको योजना समावेश छ पेनड्राइभमा ।